मच्छिन्द्रनाथ र होमो सेपियन्स – Halkhabar kura
२१ भाद्र २०७७, आईतवार २०:३७
मच्छिन्द्रनाथ र होमो सेपियन्स
इजरायली लेखक युवल नोह हरारीका अनुसार विगत ७० हजार वर्षमा वर्तमान मानव अर्थात् होमो सेपियन्समा रहस्यमय तरिकाले संज्ञानात्मक क्षमताको विकास भएको छ । जसमा प्रमुख उपलब्धिहरू भनेका कुनै पनि चिज वा स्थितिको बयान गर्न सक्ने विशिष्ट भाषा, कल्पनाशील र सहकार्यको क्षमता हुन् ।
यिनै गुणहरूले होमो सेपियन्सलाई अरू जनावरभन्दा पृथक र शक्तिशाली बनाएको हो । अनि यिनै उपलब्धिका कारण संसारमा भएका सबै सांस्कृतिक र वैज्ञानिक विकास सम्भव भएका हुन् । यद्यपि, विशिष्ट भाषा, कल्पनाशील र सहकार्यजस्ता क्षमताहरूले नै होमो सेपियन्सलाई अप्राकृतिक रूपमा क्रुर र अविवेकी पनि बनाएको छ । कल्पनाशीलता र सहकार्यको परिणामको रूपमा आज संसार सभ्य र वैज्ञानिक भएको छ ।तर इतिहासमा भएका भयानक महायुद्ध, नरसंहारहरू र विध्यमान आर्थिक तथा सामाजिक असमानताहरू पनि होमो सेपियन्सको संज्ञानात्मक क्षमताकै देन हो भन्नुपर्छ ।
साँस्कृतिक सम्पदा सभ्यताको धरोहर हो । सम्पदाहरू कुनै पनि शहरको गौरवमय चिनारी पनि हुन् । सम्पदाको अभावमा शहर विल्कुल यान्त्रिक र संवेगहीन बन्दछ । त्यसैले सम्पदाहरूलाई शहरको धमनीमा प्रवाहित हुने प्राण भने पनि हुन्छ ।
यो लेखले एक प्राचीन शहरको शाब्दिक यात्रा गर्छ । त्यही शहर, जो यल, पाटन वा ललितपुर आदि इत्यादि नामहरूले परिचित छ । त्यही शहर जुन आफ्नो आङमा असङ्ख्य मूर्त अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाहरूको गहना भिरेर अनवरत मुस्कुराइरहेछ ।प्राचीनकालदेखि यस शहरमा बसोबास गर्ने होमो सेपियन्सहरूले यसलाई जीवन्त राख्नका निमित्त अनेकन कथा र प्रथाहरूको सिर्जना गरे । तिनैलाई व्यवहारमा उतारे, तिनैमा रमाए । र, कहिलेकाहीँ आफैँले बनाएको कथा अनि प्रथामा पिल्सिएर दुःखी पनि भए । जसरी होस्, कालान्तरमा पाटनका होमो सेपियन्सहरू संस्कार, संस्कृति र सम्पदामा धनी बन्दै गए । शायद ती संज्ञानात्मक उपलब्धिका सकारात्मक उदाहरणहरू थिए । तर कहिलेकाहीँ तिनै होमो सेपियन्सहरू आफ्नो नकारात्मक क्षमता र सम्भावनाको निकृष्टतामा ओर्लिएर आफैँमाथि उपहास गर्न पनि पछि परेनन् ।
उदाहरणको रूपमा एउटा दृश्य देखियो, केही दिनअघि ललितपुरको पुल्चोकमा । अग्लो र भव्य मच्छिन्द्रनाथको रथ तल सडकमा भेला भएका अनेकन रङका वस्त्रधारी होमो सेपियन्सहरू एकआपसमा क्रोध, असंयमता, निर्लज्जता र असहिष्णुताको अस्त्र प्रहार गरिरहेका थिए ।
शायद ती अस्त्रहरू पनि सेपियन्सभित्रै लुकेर बसेका नकारात्मक गुणहरू थिए । जसले त्यस दिन बाहिर निस्कने बाटो पाए, मौका पाए ।
आफ्नै वजनको बोझले कोल्टे पर्दै आकाशतिर उचालिएको विशाल रथ मानव प्रजातिहरूलाई हेर्दै दुःखी भइरहेको थियो । सँगै दुःखी भइरहेका थिए, त्यसै रथमा विराजमान करुणामय अर्थात् मच्छिन्द्रनाथ । कारण ती मानव प्रजातिहरूले सिर्जना गरेका असभ्य र अमानवीय दृश्यहरूको मूल कारण त्यही अग्लो रथ हो भनेर बुझाइएको थियो वा बुझिएको थियो ।
बर्सेनि काँचुली फेर्दै शहरका प्राचीन गल्लीहरूमा विशाल पाङ्ग्राहरू गुडाउँदै हिँड्ने मच्छिन्द्रनाथको रथ यस वर्ष महिनौँदेखि एकै स्थानमा कुँजिएर बसेको छ । विचरा रथ आफैँ चलायमान हुन सक्तैन । होमो सेपियन्सहरूको सहकार्यको उपस्थितिमा मात्रै ऊ शहरको परिक्रमा गर्न सक्छ । तर यस बखत कोभिड–१९ नामक सूक्ष्म भाइरसले आकारमा आफूभन्दा असंख्य गुणा ठूला सेपियन्सहरूलाई निरीह बनाएर घरभित्र कोचिदिएका छन् । अतः अवलोकतेश्वरको रथसँग पनि निरीह भएर सडकछेउ शान्त उभिनुको विकल्प भएन ।
लिच्छवीकालीन राजा नरेन्द्रदेवको पालादेखि चलिआएको मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने परम्परा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो र पुरानो जात्रा हो । पाटनदेखि दक्षिणतिर रहेको प्राचीन बस्ती बुङमतीको मन्दिरमा बास गर्ने मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई बोकेर रथले शहरको परिक्रमा सुरु गर्छ । अन्तिममा जाउलाखेलमा आएर भोटोजात्रासँगै एक वर्षका लागि फेरि मच्छिन्द्रनाथ बुङमती फर्कन्छन्, जात्रा सकिन्छ ।
जात्राको रीति, नियम र प्रक्रियासँग पाटनवासीको आस्था विश्वास र परम्परा जोडिएको छ । मच्छिन्द्रनाथलाई वर्षात् र सहकालका रूपमा पूजा गरिने भएकाले यससँग प्रकृतिको सम्मान र महत्त्व पनि जोडिएको छ । यी वर्षात्‌का देवता हुन् अनि वर्षात् किसानहरूका देवता । किसानले उत्पादन गर्ने अन्नले सबैको प्राण धान्ने भएकाले अन्न नै वास्तविक भगवान् हो भन्न मिल्ला ।
महामारीका कारणले रथलाई चलायमान गराउन नपाउँदा शहरवासीहरूको मनमा निराशा र आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो । तर आक्रोश कोप्रति ? सरकार वा राज्य संयन्त्रप्रति ? रथ तान्न सहकार्यको व्यवस्था नमिलाउने गुठीप्रति ? वा कोभिड– १९ नामको भाइरसप्रति ? आक्रोश कोप्रति भन्ने मात्र प्रश्न होइन, मूल प्रश्न के हो भने मान्छेकै प्राण जोखिममा राखेर सम्पदाको नाममा गरिने असम्यमपूर्ण हठचाहिँ बुद्धिमानी काम हो वा होइन ?
शहर महामारीको त्रासमा अस्वस्थ बाँचिरहेछ । अनि अलिअलि गर्दै छेउकुनोबाट मरिरहेछ, एउटा विशाल शरीरको सूक्ष्म कोषिकाहरू क्रमशः खिइँदै गरेको अवस्थाजस्तै । संस्कृति र सम्पदाका संरचनाहरू आ–आफ्नै ठाउँमा जड भएर जमेका छन् । तर खुसीको कुरो, ती संरचनाहरू कुनै विषाणुको संक्रमणले मरेका छैनन् वा मर्ने तरखरमा ढल्दै गरेका पनि छैनन् । शायद तिनले भनिरहेका छन्:
हे हामीलाई निर्माण गर्ने होमो सेपियन्सहरू हो, तिमीहरू भाइरससँग लड । तिमीहरूको सहकार्य र विवेकमा तिमीहरूकै प्राणको रक्षा हुनेछ र तिमीहरूको रक्षा भएमा हाम्रो पनि रक्षा हुनेछ ।
वास्तवमा महामारी वा कुनै पनि प्रकोपले प्रथमत: मान्छेहरूलाई नै प्रहार गर्ने रहेछ । मान्छेहरू जोगिए सम्पदा पनि जोगिन्छ । पाँच वर्षअगाडि भूकम्पले मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरलाई माटोको थुप्रोमा परिणत गर्‍यो, तानिदै गरेको रथलाई जमिनमा ढाल्यो । तर जात्रा ढलेन वा भनौँ परम्परा भत्किएन ।
मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति मन्दिर र रथमा बस्ने भए पनि वास्ताविक करूणामयप्रतिको आस्था मान्छेको मनमा बस्छ । अनि मान्छेले नै सिर्जना गरेको कथामा बस्छ । त्यस बखत ढलेको रथ फेरि उठाइयो । केही महिनामा त्यही रथ पाटनका गल्लीहरूमा ताँनिदै थियो । भत्केको मन्दिर फेरि निर्माण हुनेरहेछ । संयमता र सहकार्य रहेसम्म सम्पदाका धरोहरहरू बनिरहने रहेछन् । बाँचिरहने रहेछन् ।
तर केही दिनअघि पुल्चोकमा सेपियन्सहरूले संयमता मिल्काए । त्यसैको अघिल्लो हप्ता वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा ईन्द्रजात्राले धैर्य र दूरदर्शीतासँग सम्झौता गरेको थियो । सेपियन्सकै तर्क कल्पनाले रचेको नियममा त्यो सम्भव भएको थियो ।
तर त्यही रचना पुल्चोकमा देखिएन । यदी पुल्चोकमा त्यसदिन मच्छिन्द्रनाथ सँगसँगै उनलाई आसामदेखि उपत्यकासम्म लिएर आउने किसान ललितज्यापु, तान्त्रिक बन्धुदत्त र कर्कोटक नाग पनि सँगै उपस्थित थिए भने तिनले के सोच्ने थिए होलान्, वा त्यो तमासा हेरेर के भन्ने थिए होलान् ?
हुन सक्छ किसानले भन्ने थियो, हे शहरबासीहरू हो तिमीहरूले अन्न उमार्ने भूमि त सखाप पारिसक्यौँ । अब के सहकालका देवताको नाउँमा पशुझैँ जुध्छौ ?’
शायद नागले भनिरहेको हुने थियो होला, ‘हे अविवेकी होमो सेपियन्सहरू, तिमीहरूले यस शहरमा नागहरू बस्न मिल्ने सबै जलाशयहरूको विनाश गर्‍यौ । यो प्रकृति तिम्रो मात्र थिएन । तर तिमीले एकलौटी ध्वस्त बनायौ ।’
सँगै उभिइरहेका तान्त्रिकले गुनासो गर्ने थिए होलान्, तन्त्र विद्यालाई त अवशानको अवस्थामा पुर्‍यायौ । अब के मनगढन्ते पूजा गरिटोपल्छौ ?’
मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा त्यही एक वर्षका लागि मात्र कहाँ हो र ? सयौँ वर्षको निरन्तरता एक महामारीले केही दिन वा महिना अल्मल्याऊला तर रोक्न कहाँ सक्छ र ? त्यो विशाल संरचनालाई शहरवासीले महामारीसँगको युद्धको प्रतीकका रूपमा सडकछेउमा अझै केही दिन अडिइरहन दिएको भए के हुन्थ्यो र ?
कथनअनुसार पाटनवासीले मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा राखेर घुमाउन नसके सो परम्परा र मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति भक्तपुरलाई बुझाउनुपर्ने हो । तर अहिले भक्तपुरवासीले दाबी गर्ने अवस्था छ र ? विश्वव्यापी महामारीले भक्तपुरलाई अछुतो राखेको त छैन । यदि अहिले पाटनमा रथ स्थिर छ भने भक्तपुरमा पनि चलायमान बन्न सक्दैन ।
त्यसबाहेक रथ तान्ने हतार जो देखिन्छ, त्यो वास्तवमा सम्पदाप्रतिको मोह हो वा सेपियन्सहरूभित्र पलाएको अहम् हो वा महिनौँदेखि घरभित्र बन्दी भएर बस्नुपर्दा निस्किएको स्व:स्फूर्त आवेग हो । कहलिएका संस्कतिविद्हरूले यसबारेमा धारणा दिनु सान्दर्भिक देखिन्थ्यो । तर यहाँ त राजनीतिक स्वार्थ र अपरिपक्वताले पो आफ्नाे आवाज उठाउन थाल्यो ।
सरकार र विपक्षी दलहरू मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्न र रोक्न क्रियाशील देखिए । राजनीति र धर्मलाई अलग राख्ने संविधानानको परिकल्पना गर्ने राजनीतिज्ञहरूले संविधानको धर्मनिरपेक्ष धारालाई अस्पष्ट परिभाषामा मुछेर धमिलो बनाइसकेका छन् ।
धमिलो र अस्पष्ट नीतिले तत्कालका लागि समस्यालाई लुकाउन सक्ला तर ढिलो चाँडो द्वन्द्व निम्त्याउने कुरामा दुई मत हुँदैन । राज्य संयन्त्र र धर्म संस्कृतिबीचको सम्बन्ध अस्पष्ट हुनुको परिणाम आउने दिनहरूमा अझै पनि देख्न सकिनेछ ।
अब महामारीबीच रथयात्राको प्रक्रिया वा स्वरूपले वर्षौँको रीतिलाई यस पटक निराश पार्न त सक्छ । तर सम्पूर्ण जात्राप्रेमी होमो सेपियन्सहरूलाई यो बोध होला कि जात्रा भनेको उत्सव हो । जहाँ उत्साह हुन्छ, स्वच्छन्दता हुन्छ । शान्त र शोकमग्न मलामीजस्तो यात्रा जात्रा बन्न सक्दैन ।
यो आकाश छुने भीमकाय रथ तानिरहँदा साँघुरा गल्लीहरूमा उपस्थित हुने हजारौँको भीडलाई कसले व्यवस्थित गर्न सक्ला ? प्रशासन र प्रहरीको हस्तक्षेपको नतिजा त आँखाअगाडि नै छ । त्यसो भए त्रासको माझ भैरवरूपी रथका पाङ्ग्राहरू सजिलै गुड्न सक्ने थिए त ? रथ तान्ने डोरीसँगै संक्रमणको लहरो पनि तानियो भने ? त्यसमाथि धार्मिक विश्वास जोडिएको विषय उसै पनि संवेदनशील हुन्छ । धार्मिक अन्धविश्वासले होमो सेपियन्सलाई सजिलै अविवेकी बनाएका घटनाहरू संसारमा दुर्लभ छैनन् ।
कुरा यति हो, सम्भावित दुर्घटनाको दोष विचरा अमुक मच्छिन्द्रनाथ वा उनलाई काखमा लिइरहेको निर्जीव रथलाई नलागोस् ।shilapatra
Previous हलेशी महादेवको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस भाद्र २१ गते आईतबारको राशिफल।
Next साप्ताहिक राशिफल : भाद्र २१ गते आईतबारदेखी भाद्र २७ गते शनिबारसम्म
कुन वेला घरमा कुचाे लगाउनु असुभ ?
१० कार्तिक २०७८, बुधबार १४:०२
मुक्तीनाथमा १०८ धारा नुहाउनाले यस्तो हुने र’हस्य…
३ कार्तिक २०७८, बुधबार १४:०५
श्रीमानलाई असाध्यै माया गर्छन यी ४ राशीका श्रीमती, तपाईको कुन
३ कार्तिक २०७८, बुधबार १३:३६